आज २०७७ साल बैशाख २३ गते मंगलवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख २३ गते मंगलवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज आफन्त र राज्यबाट मान सम्मान पाइनेछ […]
आज २०७७ साल बैशाख २२ गते सोमवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख २२ गते सोमवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष बन्धुबान्धवबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । एकपछि अर्को […]
आज २०७७ साल बैशाख २१ गते आइतवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख २१ गते आइतवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष दैनिक कार्यमा प्रगती हुनेछ । धार्मिक तथा […]
आज २०७७ साल बैशाख २० गते शनिवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख २० गते शनिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । […]
आज २०७७ साल बैशाख १९ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १९ गते शुक्रवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला […]
आज २०७७ साल बैशाख १८ गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १८ गते बिहिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज स्वास्थ्य प्रति सजक रहन जरूरी छ […]
आज २०७७ साल बैशाख १७ गते बुधवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १७ गते बुधवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष साथीभाइबाट बढी फाइदा लिने समय छ । […]
आज २०७७ साल बैशाख १६ गते मंगलवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १६ गते मंगलवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । बोलीको […]
आज २०७७ साल बैशाख १५ गते सोमवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १५ गते सोमवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष ठुला व्यक्तिले तपाईँका मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । […]
आज २०७७ साल बैशाख १४ गते आइतवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १४ गते आइतवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज पारिवारिक भेटघाटमा रमाउनेछ । धनार्जनका नयाँ […]
आज २०७७ साल बैशाख १३ गते शनिवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १३ गते शनिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज नयाँ जिम्मेवारी पाइएला । साझेदारी र […]
आज २०७७ साल बैशाख १२ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १२ गते शुक्रवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । दाम, इनाम […]
आज २०७७ साल बैशाख ११ गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ११ गते बिहिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । […]
आज २०७७ साल बैशाख १० गते बुधवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख १० गते बुधवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष कलहको योग भएकाले कसैसँग बोल्दा वा ठट्टा […]
आज २०७७ साल बैशाख ९ गते मंगलवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ९ गते मंगलवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज मालसामान हराउन सक्छ । सहकर्मीबाट विरोध […]
आज २०७७ साल बैशाख ८ गते सोमवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ८ गते सोमवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष हिडडुल र यात्राबाट हानि हुनसक्छ । जिद्दीपनाले […]
आज २०७७ साल बैशाख ७ गते आइतवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ७ गते आइतवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । […]
आज २०७७ साल बैशाख ६ गते शनिवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ६ गते शनिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज परिणाममुखी जिम्मेवारी वहन गर्ने समय आएको […]
आज २०७७ साल बैशाख ५ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ५ गते शुक्रवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ […]
आज २०७७ साल बैशाख ४ गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ४ गते बिहिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । शुभकार्यको […]